Kabaha badbaadada ee SR55, oo leh uTurn Nidaamka Lacyng | AIRTOX
AIRTOX Kabaha badbaadada SR55
Raaxo iyo badbaado leh naqshad, naqshad isku-dhafan
Kabaha badbaadada ee loo yaqaan 'SR55' kabaha badbaadada ayaa dib loo qaabeeyey bishii Juunyo 2019, iyadoo la wanaajinayo labada qaab, raaxo iyo waara. Qaabka ayaa leh midsoles leh AIRTOX nidaamka-hawada 3.0 kaas oo bixiya heer aan xakameyn dabacsanaan iyo raaxo.
Qeybta kore waxaa laga sameeyay Cordura® Dharka - shey dhar ah oo bixiya neefsashada oo sarreeya iyo wareegga hawo hawleedka gudaha kabaha. Marka lagu daro AIRTOX PowerBreeze® technology, SR55-kaaga wuxuu sii ahaan doonaa mid cusub illaa maalinta oo dhan.
Kabaha badbaadada ee loo yaqaan 'SR55' kabaha badbaadada ayaa dib loo qaabeeyey bishii Juunyo 2019, iyadoo la wanaajinayo labada qaab, raaxo iyo waara. Qaabka ayaa leh midsoles leh AIRTOX hawo-nidaam 3.0 oo bixisa heer aan la xakamayn karin ...